के तपाई सपनामा नाग देख्नुहुन्छ ? कस्तो नाग देख्दा मिक्छ शुभ सङ्केत ? हेर्नु-होस् !
काठमाडौं : सर्प र मानवको सम्बन्ध मानव सृष्टिको प्रारम्भिक कालदेखिनै चलिआएको छ। सर्पसंग सम्बन्धित कथाहरु, हिन्दु ध’र्मशास्त्र तथा पौ’राणिक कथाहरुमा समावेश भएका छन्।
हिन्दु शास्त्र अनुसार सर्पलाई पूजा योग्य जनावर मान्ने गरिन्छ र हरेक वर्ष नागपंचमीमा वि’शेष पूजा गर्ने गरिन्छ। भगवान शिवले आफ्नो गलामा साँप बेरेको समेत देख्न सकिन्छ ,जुन हेर्दा हामीले साँपको धार्मिक महत्व समेत बुझ्न सक्छौ।
यदि हामीले बाटोमा हिंड्दा वा केही कामको शिलशिलामा सर्प देख्दा डरका साथै शरिरबाट पसिना छुट्ने गर्छ तर यसलाई सपनीमा देख्दा,जीवनमा के कस्तो फाइदा – बे’फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा आज हामी तपाईहरुलाई बताउन जाँदै छौँ।
* यदि तपाई कुनै विशेष कार्यको लागि जाँदै हुनुहुन्छ र बाटोमा साँपले बाटो काट्यो भने अत्यन्तै शुभ मान्ने गरिन्छ। यसले आफू हिंडेको कम सम्पन्न हुने संकेत गर्दछ।
२०७८ आश्विन ७, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 116 Views